« Kolontsaina festival anaty elakelantrano »: kanto hampivoarana ny maha olona sy ny fiarahamonina | NewsMada
« Kolontsaina festival anaty elakelantrano »: kanto hampivoarana ny maha olona sy ny fiarahamonina
Miavaka amin’ny samy hetsika zavakanto ny « Kolontsaina festival anaty elakelantrano », hotanterahina any Toamasina manomboka rahampitso hatramin’ny 28 oktobra izao. Anehoana seha-javakanto samihafa izy ity ary mikendry ny hampivoarana ny maha olona sy ny fiarahamonina. Efa nanomboka ny 22 oktobra teo ny atrikasa samihafa : ny dihy ho an’ny fampiroboroboana ny maha olona, ny « slam », ny « graphisme », hanatsarana ny fiainana, ny fampiasana indray ireo kojakoja efa niasa ho fiarovana ny tontolo iainana, sns. Tsy ireo tanora liana amin’ireo sokajim-piofanana ireo ihany no mahazo tombony fa ny « ety ivelany » koa.
Hatokana ho an’ireo tanora tsy ampy taona, ao amin’ny fonjan’Ambalatavoahangy, ohatra, ny rahampitso. Haneho ny kanto, tsy fahitany ao amin’ny toerana misy azy, izy ireo ary hizarana traikefa, tena ilainy amin’ny fiainany any aoriana, rehefa mivoaka ny fonja. Amin’io rahampitso hariva io ny fanokafana ny « Kolontsaina festival anaty elakelantrano », andiany fahefatra.
Ny asabotsy, hisy ny fanadiovana, arahina seho zavakanto samihafa, ao amin’ny fokontany Morafeno, miaraka amin’ny ONG Fitiavana. Ny tolakandro, hitondra ny fahaizany sy ny talentany, ny kaompania New Gravity, miaraka amin’ny TricolorZ.
Teatra, hira klasika ary dihy no handravaka ny ao amin’ny Alliance française ao Toamasina, amin’io asabotsy io. Hofaranana ao amin’ny Gare des Manguiers ny tontolo andro. Hotontosaina ao amin’ny Ecovillage artistique Vohitsara ny « Kolontsaina festival anaty elakelantrano », ny alahady, amin’ny alalan’ny fampisehoana maimaimpoana.